Codependent Latabatra - Famolavolana
Latabatra Ny psikology miorina amin'ny psikolojia sy ny famolavolana, mifantoka manokana amin'ny fisehoana vatana ara-tsaina, ny fahatokisana. Ireo latabatra mifampitaona roa ireo dia tsy maintsy miankina amin'ny tsirairay avy mba hiasa. Ireo endrika roa ireo dia tsy mahavita mijoro irery, fa miara-mamorona endrika iray miasa. Ny latabatra farany dia ohatra matanjaka izay lehibe kokoa noho izany ny ampahany rehetra amin'ny ampahany aminy.
Anaran'ny tetikasa : Codependent, Anaran'ny mpamorona : Fletcher Eshbaugh, Anaran'ny mpanjifa : 1th Studio.
Latabatra Fletcher Eshbaugh Codependent